Ukuhambelana kothando lweCapricorn - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kothando lweCapricorn
Ukuhambelana kothando lweCapricorn
Abathandi beCapricorn kuthiwa bahambelana kakhulu neCancer kwaye ubuncinci buhambelana neSagittarius. Ukuba luphawu lomhlaba oluhambelana nomqondiso we-zodiac kukwaphenjelelwa bubudlelwane phakathi kwezinto ezine zodiac: Umlilo, uMhlaba, umoya kunye naManzi.
Abo bazalelwe eCapricorn babonisa izinto ezithile xa benxibelelana nolunye uphawu lweempawu zodiac ezilishumi elinanye kunye neziqu zabo. Nganye yezi zinto zidityanisiweyo zibangela ukuxoxwa ngokwahlukeneyo.
Kwisicatshulwa esilandelayo siza kuchaza ngokufutshane konke okuhambelana phakathi kweCapricorn kunye neminye imiqondiso yeenkwenkwezi.
loluphi uphawu ngoJanuwari 5
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neeAries
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neTaurus
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neGemini
I-Pragmatic kunye nenyani yeCapricorn ngamanye amaxesha siziva isidingo sokuyalela ukuba ubudlelwane babo buhamba njani ngelixa iGemini eguqukayo kwaye inamandla ayizimiselanga ukuthobela kwaye ikhetha ukuhlala kwimimandla ephuphayo kodwa ngandlela thile izinto ziyaziphumelela ezi zimbini.
iimars kwindlu yesithathu
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neCancer
Ukuhambelana kweCapricorn kunye noLeo
Olu phawu lomoya kunye nolu phawu lomlilo ngumdlalo onokuhamba nangayiphi na indlela! ICapricorn inayo yonke into eyenziwayo ukuvutha amadangatye kaLeo ngexesha elifanelekileyo ngelixa uLeo esazi ngqo ukuba uza kubeka nini amandla kwiCapricorn ezolileyo nebaliweyo.
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neVirgo
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neLibra
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo ongaqhelekanga! Zombini zizinzile kodwa uCapricorn ozolileyo akazukuyiqonda ngokupheleleyo iLibra enamandla.
Iinjongo zabo zahluke kakhulu kangangokuba kunzima kubo ukuba bafumane indawo efanayo xa kufikwa kwizicwangciso zexesha elizayo.
ILibra ifuna ukuzinikela ngelixa unqwenela ngamandla, iCapricorn eyiyo iya kuthobela kuphela xa ethathela ingqalelo, kwaye xa lifikile elo xesha, iLibra kudala yahamba.
Ukuhambelana kweCapricorn neScorpio
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neSagittarius
Olu phawu lomlilo kunye nolu phawu lomhlaba ngumdlalo ongaqhelekanga! Bobabini bayonwabela iziyolo ezilula zobomi kwaye yinto nje yexesha ngaphambi kokuba bafumanise ukuba ubukho bomnye nomnye butyebisa njani ubomi babo.
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neCapricorn
Ukuhambelana kweCapricorn kunye neAquarius
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lomoya ngumdlalo ongenakwenzeka! Ngokwendalo bayatsala kwaye bayancedisana njengeethoni ezinobuchule zeCapricorn iAucarius enamandla.
I-Methodical kwaye ngaphezulu kwezinto uCapricorn ngamanye amaxesha uziva isidingo sokuyalela ukuba ubudlelwane babo buhamba njani ngelixa i-Aquarius eguquguqukayo kwaye inamandla ayizimiselanga ukuthobela kwaye ikhetha ukuhlala kwimimandla ephuphayo kodwa ngandlela thile izinto ziyaziphumelela ezi zimbini.
Ukuhambelana kweCapricorn kunye nePisces
Olu phawu lomhlaba kunye nolu phawu lwamanzi ngumdlalo olula! Ngokumangalisayo iCapricorn ibonakala ngathi iyayiqonda iPisces efuna ukuba wedwa kunye nothando.
I-Pisces ikulungele ukuthobela izigqibo zabaphetheyo baseCapricorn ngoko ke zibekelwe ixesha elide ukuba elowo kubo uyalazi ixesha lokumisa kwaye aqonde ezinye ezibalulekileyo.
I-Uranus kwiNdlu ye-11: Ibuchonga njani ubuNtu bakho kunye neSiphelo
i-virgo horoscope namhlanje ithande u-2015
yintoni umatshi 20 uphawu lweenkwenkwezi
yintoni i-horoscope eyi-12
Umfana we-gemini kunye nentombazana entle